Al shabaab oo ciidan dhar cad ah ku weeraray magaalada Muqdisho -News and information about Somalia
Home Warkii Al shabaab oo ciidan dhar cad ah ku weeraray magaalada Muqdisho
Ugu yaraan hal qof ayaa dhintay halka saddex kale ay ku dhaawacmeen kaddib markii koox Baskoolado ku hubeysnaa ay weerar ku qaadeen Ciidamo dharcad ah oo ka tirsanaa nabad sugidda Soomaaliya.
Weerarka ayaa xalay fiidkii ka dhacay Waaxda Calasow dheere ee degmada Shibbis ee Magaalada Muqdisho.
Sida ay inoo xaqiijiyeen goobjoogayaal xilliga weerarka dhacayay ku sugnaa halkaas waxaa goobta ku geeriyooday mid ka mid ah dadkii weerarka lagu qaaday.
Dadka dhaawacmay waxaa ka mid ah Haweeney ka mid ahay kooxda la weeraray, waxaana ay ka tirsanaayeen Nabad Sugidda Soomaaliya.
Dhaq dhaqaaqa Al-shabaab oo iyaguna sheegtay mas’uuliyadda weerarka ayaa waxaa ay sheegeen in ay halkaas ku dileen labo ka mid ah Ciidamada Nabad Sugidda Baskoolado ay wateenna ka qaateen.
Previous articleHaweeney Xil Sare Looga Magacaabay Wasaaradda Gaashaandhigga Somalia
Next articleDHAGEYSO: Buuq Siyaasadeed Oo Durba ka dhashay Hanjabaadii Ra’iisal Wasaare Kheyre
Wararkii Ugu Dambeeyay Xiisad Maanta Ka Taagan Degmada Buulo-Burte
Somalia Iyo Marooko Oo Is-Dhaafsaday Xogo Ku Aaddan Garsoorka